Screen | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
iOS 8 စတိုင်နဲ့ Lock Screen အလန်းလေး HI LockScreen (iOS 8,Parallax) v2.6 Apk
ကွန်ပြူတာ အတွက် တင်တာတွေ များနေတော့ အခု တစ်ခေါက်တော့ Android ဘက် နည်းနည်းပြန်
လှည့် တာပေါ့ဗျာ။ အခု Android User တွေ အတွက် Lock Screen အမိုက်စားလေး တစ်ခုရထားလို့
တင်ပေး လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ တော်တော်လေးကို လန်းပါတယ်ဗျာ။
iOS 8 စတိုင်နဲ့ Lock Screen ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါ တယ်။ အခြားသော Lock Screen များထက် ဒီဇိုင်း
အရပိုပြီးမိုက်တဲ့ အပြင် Feature တွေ ကလည်း ပိုစုံလင် ပါတယ်။ Lock ချထားတဲ့ Screen ပေါ်မှာပါ
Notification တွေကို ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလိကြည့်ပါ ဗျာ။
Lock Screen တစ်ခုထဲတင် မကပဲ iOS 8 စတိုင်နဲ့ Widget တွေကိုပါ ထည့်သွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ နမူနာအနေနဲ့ အောက်မှာ Screen Shot တွေ ပြထား ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.1 နှင့် အထက်ဖုန်း
များမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
★ HI LockScreen, the top iOS 8 style Locker with Parallax 3D effect. Neat, Clean, NO AD ★
ကဏ္ဍ Android, Locker, Phone Application, Screen
သူငယ်ချင်း တို့ရဲ့ ကွန်ပြူ တာ monitor မှာလှပတဲ့ နောက်ခံပုံ အရှင်လေးတွေ ထည့်သွင်းချင် သူတွေ အတွက်
Dream Aquarium Screensaver လေးကို တင်ပေးလိုက် ပါတယ်။
desktop အလှဆင် ချင်သူတွေ အတွက် ဒါလေးကို အင်စတော လုပ်လိုက်တာနဲ့ နောက်ခံ Animation ပုံ အရှင်
လေးတွေ ကြိုက်ရာရွေးပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Full ဖြစ်စေဖို့ အတွက် Crack ဖိုင်လေးကို ထည့်သွင်းပေး ထားပါတယ်။ Crack ဖိုင်လေး ကို ဖွင့်ပြီး ကော်ပီ
ကူးကာ အင်စတောလုပ် ထားတဲ့ C/program ထဲကသူ့ရဲ့ မူရင်းဖိုင် ထဲမှာ သွားထားပေးလိုက်ပါ။
From: အောင်ကျော်ခိုင် (ပုသိမ်) by ရန်ကုန်သား
သူငယ်ချင်း တို့ရဲ့ ဖုန်းကို screen off and lock အလွယ်လေး လုပ်နိုင်တဲ့ Soft Lock Screen app လေးကို
Uninstall လုပ်ရတာလည်း လွယ်ပါတယ် Go to Security -> Device administrators ပြီးရင် check off
Soft Lock Screen ကနေ uninstall လုပ်လိုက် ရုံပါပဲ။ Android : 2.2 နှင့် အထက်က စပြီး အသုံးပြု နိုင်
Email Developer: diewland@gmail.com
Play Store Link: Soft Lock Screen
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, June 08, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, Screen
သူငယ်ချင်း တို့ အတွက် Coloring Screen Live Wallpaper လန်းလန်းလေးကို တင်ပေးလိုက် ပါတယ်။
color effects ပေါင်း 20 ကျော် ပါဝင် ပါတယ်။ day/ night effects, red, green, blue, yellow, orange,
cold အစရှိ သဖြင့် မိမိကြိုက်ရာကို Wallpaper မှာ ထားနိုင် ပါတယ်။ ပုံမှာပြ ထားတဲ့ အတိုင်း Animated
sun, moon, rain, snow, stars, clouds, lightning, fog and frost မိမိကြိုက်ရာကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
Android : 2.1 နှင့်အထက်ကစပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Play Store Link: Coloring Screen
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, Screen, Wallpapers
Nox SkinPack For Windows 7/ 8/ 8.1 (46Mb)
Skin Packs လန်းလန်းလေး တွေကိုမှ စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် Nox SkinPack
ကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ Windows 7/ 8/ 8.1 အတွက်2ခုလုံးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မိမိ အသုံးပြုရာ ၀င်းဒိုးကိုရွေးပြီး အင်စတော လုပ်လိုက်ပါ။ မလိုချင်လို့ ပြန်ထုတ် ရင်လည်း
unistall လုပ်လိုက်ရုံဖြင့် အရင် ၀င်းဒိုး အတိုင်းပြန်ဖြစ် သွားပါမယ်အသုံးပြုလွယ်ကူပါတယ်။
အောက်မှာပုံတွေပြထားပါတယ်။ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 46Mb ရှိပါတယ်။
Preview For Windows 8/8.1
Note : Skin Packs installer have easy and safe install option , Please unistall old or other version of skinpacks before install new version.
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, February 15, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Screen, Window
အခုတင်ပေး လိုက်တဲ့ Window 8 Skin Pack လေးကတော့ တော်တော် လန်းတယ်ဗျ။ ကျွန်
တော်အိမ်မှာ အခု Skin လေးကို အုပ်ထားတာ Window 8 သုံးနေရတဲ့ ပုံစံလေးပါ။
အသုံးပြုရတာလည်းလွယ်ပါတယ်။ Window7ပေါ်မှာဘဲ သာမန် Software တစ်ခု Install
လုပ်သလိုမျိုး အခု Skin Pack လေးကို Double Click နှိပ်ပြီး Install လုပ်လိုက်ရုံပါဘဲ။
Install လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ Program တစ်ခုမှ Run မထားပါနဲ့။ Install လုပ်ပြီးသွားရင် Re-
Window ပြန်တက်လာရင်တော့ သင့်ရဲ့ ကွန်ပြူတာပေါ်မှာ Window 8 တစ်ခုလုံး ကိုအသုံး
ပြုရသလိုမျိုး မြင်နိုင် သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ Error မရှိဘဲအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
မသုံးချင် ဘူးဆိုရင်လည်း ပြသနာမရှိပါဘူး။ သာမန် Software တစ်ခု Install လုပ်သလိုမျိုး
ဘဲ Control Panel ထဲကနေ၀င်ပြီး Uninstall လုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ အရင်တင်ထားတဲ့ Win-
dow7ကို ပြန်သုံးနိုင်မှာ ဖြစ် ပါတယ်ဗျာ။ License မလို ပါဘူး။ နမူနာ အနေနဲ့ အောက်မှာ
Screen Shot တွေပြထားပါတယ်။
Skin Pack Auto UXThemePatcher Version 3.0 (9Mb)
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေ Skin Pack လန်းလန်းလေးတွေ သုံးချင်တယ်ဆိုရင် Auto UXThemePatcher
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ကာလာစတိုင်မျိုးကို ရွေးချယ်ပြီးလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကာလာ လေးတွေ ရောင်စုံပြေး
နေအောင်လဲ လုပ်လို့ရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ စိတ်ကူးရှိသလို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
[Windows 8.1 & Windows 8 & Windows Server 2012 & Windows7&
Server 2008 R2 & Windows Vista & Windows Server 2008 & Windows XP
& Windows Server 2003] [X64(64Bit) & X86(32Bit)] [All Service Pack] [All
Version] [All Language] စသည်တို့မှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, December 28, 2013 No comments:
ကဏ္ဍ Screen, Theme
Sim Aquarium v3.7.Build.55 Premium Screen Saver For Win7, 8,Vista Xp 32MB
မိမိ ကွန်ပျူတာ ကနေ ရေအောက် ကမ္ဘာကို အလည် တစ်ခေါက် သွားချင်တဲ့ သူတွေ အတွက် Screen
Saver အလန်းပါ ဗား၇ှင်းအသစ်ပါ အကောင်လေးတွေ ပိုစုံလာပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားရင် အောက်က လိပ်စာမှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, December 23, 2013 No comments:
Windows9Skin Pack for Windows7& Windows 8
Windows9အတွက် ကြိုတင်ရင်ခုန်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ Window 7,8 မှာ Windows9ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ လန်းနိုင်ပါတယ်...:)
Support: Windows 8,7, Windows 8.1 – [X86_X64] – [All Language] – [All Version]
Download | Windows9Skin Pack for Windows7All Version - (13.3 MB)
Download | Windows9Skin Pack for Windows 8 All Version - (12.4 MB)
မျှဝေသူ ရစ် မောင် မှာ Wednesday, December 04, 2013 No comments:
ကဏ္ဍ Screen, Wallpapers, Window